DEG DEG+DAAWO:Shacabka magaalada JigJiga oo hubka soo gurtay & Xaalada oo xun + 250 Askari oo ku dhow in la furto kadib markii – Puntlandtimes
DEG DEG+DAAWO:Shacabka magaalada JigJiga oo hubka soo gurtay & Xaalada oo xun + 250 Askari oo ku dhow in la furto kadib markii
JIGJIGA(P-TIMES)-Sidda ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Jigjiga ee xarunta dowladd degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ciidanka milateriga federaalka Itoobiya ee shalay ay isku dhaceen shacabka ayaa maanta loo diiday in ay ka baxaan magaaladaasi Jigjiga. HALKAN RIIX OO KA DHAGAYSO WARARKII UGU DAMBEEYEY
Boqolaal kamid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga oo ka cadhaysan dhibkii shalay dhacay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Itoobiya ay u diideen in ay magaalada ka baxaan iyaga oo nabad qaba.
Shacabka ayaa dalbaday ciidamada Itoobiya ay hubka wareejiyaan isla markaasna ay magaalada iskaga baxaan iyaga oo farabanaan.
Xerada ay ku jiraan tirada ugu badan ee ciidankaas waa xerada Garab case oo la sheegay in qiyaastii ilaa 250 askari oo milateri ay ku jiraan, waxaana ku hareeraysan shacabka deegaanka iyo ciidanka Liyuu Booliska.
Ilaa 100 askari ayaa la sheegay in ay ku jiraan xerada Dul Qabow ee u dhow garoonka dayaaradaha ee magaalada Jigjiga, halka xero ku taalla dhanka Kaaraa Mardha ayadana la sheegayo in ay ku jiraan askar ilaa 50 ah oo qaabilsan maamulka.
Xerada ay ku jiraan tirada ugu badan ee ciidankaas waa xerada Garab case oo la sheegay in qiyaastii ilaa 250 askari oo milateri ay ku jiraan.
HALKAN RIIX OO KA DHAGAYSO WARARKII UGU DAMBEEYEY
Wararku waxay sheegayaan in ay dhinac kasta ka fadhiyaan askar ka tirsan ciidamada Liyuu booliska.
Dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Diri-dhabe ee DDSI ayaa sheegaya in rabshado la mid ah kuwii shalay ka dhacay Jigjiga ay halkaasi ka qarxeen.